Rohamena S4 (401900-40-1) - Manufacturers - Phcoker Chemical
SKU: 401900-40-1 Sokajy: Serasera Sarmana
Sari-tanana roaton'ny S4 (401900-40-1)
Rohamena S4 (401900-40-1) Description
S-4, fantatra koa amin'ny anarana Andarine na GTx-007, nalaina am-bava. Anisan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe SARM izy io -a tsy misy steroidal selektive système modifier izay misy sela androgenic sy anabolika amin'ny biby. Ho an'ny fitsaboana ny toe-draharaha toy ny hozatra, ny osteoporose sy ny hypertrophy malaza. Tsy dia misy vokany ratsy eo amin'ny vokatra anabolika sy androgenic toy ny SARM hafa. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina sy amidy izy io ho toy ny fikarohana fikarohana, izay ampiasain'ireo atleta mikasa ny hahazo ny tombontsoa azo avy amin'ny tanjaka sy ny lanjan'ny hozatra tsy misy ny vokatra mampidi-doza amin'ny steroids anabolic. Ankoatra izany, ny poofa RX S4 dia ampiasaina ho toy ny ampahany amin'ny steroid stacks mba hanatsarana ny tsingerina tsy hampisy fiantraikany bebe kokoa, na aromazasiona.
Rohamena S4 (401900-40-1) Specifications
Product Name Rojo S4 vovoka
Anarana simika Andarine, GTX-007, UNII-7UT2HAH49H, 7UT2HAH49H, AK-41009, SARM S-4, Andarine - GTX-007, (2S) -3- (4-Acetamidophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-N- [ 4-Nitro-3- (trifluoromethyl) phenyl] propanamide
mitsonika Point 70-74 ℃
Ny antsasaky ny biolojia Under 7hours
Solubility Azo atao ao amin'ny DMSO (85 mg / ml), rano (<1.2 mg / mL), ary Ethanol (85 mg / mL), azo atao ihany koa amin'ny Propylene Glycol sy PEG400.
Storage Temperature 3 taona amin'ny 20 ° C
Rojo S4 vovoka Application Tablets / capsules ho an'ny fanadiovana, famerenana, ny tebiteby ary ny herim-po (sans bloating)
Vola vita tamin'ny roapolo S4 (401900-40-1)
Ny S4 SARM dia ampiasaina amin'ny zava-drehetra. Ny famolahana, ny fitrandrahana na ny famerenana dia tsy olana amin'ny mpanolontsaina ny solosaina androgen.
Amin'ny tapaka iray dia afaka manantena anao fa hanampy anao ho mafy orina sy vovoka izany. Fantatra amin'ny fampitomboana ny tanjaka sy ny massa izany, na dia mihena ny kalôria vitsivitsy aza.
Raha ny hevitro, ny vatoharan-tsakafo S4 SARM dia tena mamiratra rehefa mipoaka.
Ao anatin'ny herinandro na roa dia hanomboka hahazo hery sy halehibe maro ianao. Na amin'ny dingan'ny 50mg aza.
Ary ny zava-dehibe dia ny hoe ny SARM dia heverina ho vondrona madio. Tsy ho afaka hitazona rano ianao na hipoaka mandritra ny ampahany betsaka.
Azo antoka fa anisan'ireo SARM mahery indrindra izy io. Tsy isalasalana fa ao an-tsaiko aho fa angamba mbola matanjaka noho ny LGD4033.
Raw S4 vovoka (401900-40-1) Mechanism of Action
Tahaka ireo zava-mahadomelina hafa rehetra an'ny SARM, ny vovo-koditra S4 dia miasa amin'ny alàlan'ny fanjary amin'ny mpanolo-tsaina. Io fomba fiasa io dia mitovy amin'ny fomba fiasan'ny steroids. Ny fahasamihafany ihany dia ny tsy ahitàny ny fiantraikany sy ny tsy fahampiana mifandraika amin'ny fampiasana steroïde. Ny S4 dia nomena anarana manokana momba ny hery, ny fahombiazana ary ny fanorenana hozatra.
Ny fifandimbiasana ny vovo-dronono S4 ao amin'ny vatana no mifidy. Midika izany fa mifidy ny vatany izy io izay te hiara-miasa sy hanatsara ny fatrany amin'ny fiantohana fa ny ampahany hafa amin'ny vatany dia tsy maratra.
Mety hahatonga ny hozatra ho sarotra, vovobulary ary maina hatrany ny herinandro-1. Ny sasany toa an'i Winstrol, mildre fotsiny.
Mba hanampiana an'izany, dia mamorona tontolo lavorary anabolika ao amin'ny vatany izay mamela ny zavatra hafa hampiakatra azy.
S4 vovoka roapolo no manerana ny toerana. Nampian'ireo olona ny fametahana stacks, antontam-bidy, programa fanarenana vatana.
Izany dia mandra-pahatongan'ny tatitra tsy mitombina momba ny fiantraikan'ny fahitana momba ny fahitana.
Tamin'ny voalohany, ny tatitra dia tamin'ny ankapobeny dia nahita ny loko diso sy ny loko marefo amin'ny zavatra. Ny karazany toy ny mahita an'izao tontolo izao ao Sepia.
Saingy rehefa tapitra ny tatitra momba ny fahajamban'ny fahajambana, dia nanjary bête-noir avy amin'ny SARMS ireo S4.
Tena be loatra izany, fa saika nivarotaka tamin'ny varotra ny varotra. Tsy misy olona maniry hanakorontana amin'ny fahitana azy ireo.
soa ny Rohdy S4 roahina (401900-40-1)
Ny S4 dia ampiasaina amin'ny famoahana, famenoana ary famerenana.
Ny fampiasana S4 dia mampitombo ny fatran'ny otrikaretina ao amin'ny vatana ary mampihena ny lipase ny lipoproteine ​​ao amin'ny vatana. S4 dia miantoka fa ny vatany dia tsy mahavaky ny volany amin'ny tazomoka mandritra ny tsy fahampian'ny kaloria. Ny herinandro fanodinana dia mitaky herinandro 12.
Ny dikan'ny anarana dia midika hoe tanjaka raha tsy misy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitehirizana rano. Ny vokatry ny S4 dia tsy voatery ho mahazendana loatra, fa manome antoka fa ny vatany dia tsy mamoy ny tanjaka voavory manerana azy.
Izany no dingana amin'ny fanesorana ny fatin'ny tavy sy ny fihenan'ny volavola amin'ny fotoana iray. S4 dia mampiroborobo ny vatana mangatsiaka ary manatsara ny vatana.
Vovonam-bolan'ny S4 Recommended (401900-40-1) Dosage
S4 dia toy ny version malgache nataon'i Winstrol. Tena matanjaka amin'ny dosage ambany amin'ny 25 mankany 50mg. Na eo aza ny SARM tena marefo, tena mahery vaika tokoa izy io.
1 famerenana for Rohamena S4 (401900-40-1)
Nahazo vovony S4 mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy fahamendrehana!